ubusazi ukuba ungongeza ezinye iiapps kwimowudi yokugcina amandla kwi-galaxy s5?
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ngaba ubusazi ukuba ungongeza ezinye iiapps kwiNdlela yokuGcina Amandla kwi-Galaxy S5?
Isamsung kunye ne-rsquo; s i-flagship ye-smartphone yonyaka, i-Galaxy S5, ifike phakathi kokulindelwe okuphezulu kakhulu, kwaye ngelixa ingenayo Umboniso we-Quad HD okanye ISpapdragon 805 I-chip abaninzi ababenethemba layo, yajika yaba ngumdlali oqinileyo phantse kuzo zonke izinto.
Kwaye kulo nyaka, i-Samsung ayizisanga ngesiqhelo isiqendu seempawu zesoftware encinci (ukuba, ngokunyanisekileyo, zihlala zinobunkunkqele). Endaweni yoko, yayijolise ngakumbi kwiimpawu ezinentsingiselo, kwaye enye yezona zinto zisebenzayo zibaluleke kakhulu kwi-Galaxy S5 Imowudi yoGcino lwaMandla (UPSM). Ungakwazi ukuyenza nanini na ixesha ukwandisa ubomi bebhetri: umzekelo, ukuba une-5% yejusi yebhetri eseleyo, ukujika i-UPSM kuya kuyenza ifowuni yakho ihambe iiyure ezili-12.
Ukufezekisa oku kunyusa okumangalisayo kubomi bebhetri, i-Samsung isebenzise indibaniselwano yeendlela: icima umbala kwisibonisi se-AMOLED ishiya umbala omnyama kuphela, ifake iprosesa kwi-cores ezimbini kuphela ezisebenza kumaza asezantsi, kwaye ibulale konke kodwa okubaluleke kakhulu kwiiapps, kukushiya nomsebenzi ongundoqo njengefowuni, ukuthumela imiyalezo, kunye nesikhangeli.
Ungathini ukuba unokongeza usetyenziso olunye okanye ezimbini, nangona kunjalo? Ngokuqinisekileyo, oku kungenza ukuba i-UPSM isebenze kancinci, kodwa ukuba ufuna ijusi ephezulu KUNYE loo app ikhethekileyo, oku kunokuba sisisombululo esifanelekileyo.
Ngethamsanqa, kukho usetyenziso olwenza loo nto kanye: Umphathi we-S5 UPSM. I-rsquo; ifumaneka ngedola kwiVenkile kaGoogle yokuDlala, kodwa iza nomqolomba omnye-ifuna ingcambu. Ayisiyomboniso mkhulu lowo-entsha & lsquo; iTowelroot & rsquo; Isisombululo kulula kakhulu ukusisebenzisa, kwaye unokulandela eyethu Isikhokelo seengcambu ze-Samsung Galaxy S5 apha . Emva kokuba uyisiphule neengcambu, yiya nje kwi-app engezantsi, kwaye wenze i-UPSM ngokwezifiso zakho.
Khuphela umphathi we-S5 UPSM (ingcambu iyafuneka) kwi-Android
umthombo: Abaphuhlisi beXDA nge I-Android Beat
Inqaku le-verizon 10 yoku-odola kwangaphambili
jonga iifoto ezibukhoma kwi-android
Ixabiso leSamsung Gear S4 kunye nomhla wokukhutshwa: ulindelo lwethu
Bhatalwa ngokwenza iakhawunti yakho ye-Facebook okanye ye-Instagram isebenze
Deal: Thenga i-Samsung Galaxy S7 kwaye ufumane i-250 yeeKhadi zeZipho zokuThenga eziSimahla
I-Samsung Galaxy S21 kunye ne-Apple iPhone 12 Pro
Ungayithoba njani i-iPhone yakho okanye i-iPad ukusuka kwi-iOS 9 ukuya kwi-iOS 8.4.1
IMetroPCS inyusa amaxabiso edatha ye-LTE engenamda ukuya kwi-70 yeedola ngenyanga, iqala ukubetha idatha yehagi
Imidlalo ye-5 ye-Android kunye ne-iOS efana neLigi yamaNqaku abalandeli beemfazwe ezinkulu